Ivanhoe | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Ivanhoe | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Ọ bụrụ na ị na-eyeing maka ụfọdụ ọmarịcha ebu, mkpụrụ cha cha ohere mpere nwere nke zuru okè ihe unu! Nke a na-ewu ewu elk mmepụta-ewe gị azụ ochie ụbọchị a zuru okè amalgamation ndị ọhụrụ na nke, trendy oghere igwe, na a plush ntụpọ matriks. Ọ na-ahapụ ị na-egwu spins na ala na 5 iche iche na-etoju iji merie ụfọdụ ọrụ na-enye ichekwa.
Banyere Developer nke Ivanhoe
Elk Studios mepụtara ịtụnanya fruity cha cha ohere mpere na ọkaibe na ụdị na-algọridim elu ịtụnanya eserese. Mmụọ nsọ site a akwụkwọ site Sir Walter Scott, na studio abịa na egwuregwu a na-enwe a ochie aka. The Mmepụta mara maka eke odide nke ndị na; site na ha ọhụrụ.
Ọ na-enye gị a zuru okè Ịgba Cha Cha ahụmahụ na n'elu klas winnings. Nke a otu nke n'elu mkpụrụ cha cha ohere mpere nwere atụmatụ dị ka:
Stake-The game is powered by 3 esi anwụde tinyere 17 akwụ edoghi. Ị nwere ike kpọọ ya malite 20p kwa atụ ogho ruo £ 100 gafee ngwaọrụ dị ka laptọọpụ, smartphones, na PC.
Symbols – The fruit casino slots are based on the comeback of the King as Ivanhoe ịlụ ọgụ na Richard ka ya azụ ocheeze. The ohere mpere nwere akara dị ka wọtamelọn, cherị, okpueze, lemons, acha anụnụ anụnụ 7s, red 7s, Ogwe, na-ewu ewu na-acha ọcha na-acha uhie uhie ọkọlọtọ na-enweta na ị site mara mma bonus game feature.
Bonus levels – It has got 5 dịgasị iche bonus nke nwere ike hụrụ na ngosipụta nke ntụpọ matriks. Ọ yiri nkịtị ochie ịke pinball igwe. I nwere ike imeri bonus feature naanị ma ọ bụrụ na ị nwere ike nweta ego na akara na nke ọ bụla nke 3 -esi anwụde. Mgbe emeri a set nke ego, i nwere ike gia ruo a elu nke nsogbu na-ebili multipliers. Ọzọ free spins, i nwere ike jideekwaozo ocheeze maka Richard iji merie azụ okpueze.
Free spins -This mkpụrụ cha cha ohere mpere game na-enye gị free spins na okpueze eme dị ka anụ nke nọ n'ọnọdụ ndị ọzọ nile na akara ngosi, ma e wezụga ikposa. Mgbe mbụ 2 etoju, ị na-atụ anya iji merie dịkarịa ala 25 ugboro ihe gị ahụhụ ahụ. Na ọzọ 2 etoju, ị nwetara iji merie 200 ugboro. Na kacha larịị, i nwere ike bag 3000 ugboro.
Multipliers-It helps you with multipliers starting at 2x and adding up by 1 n'ọkwa ọ bụla. Ị nwere ike iru a kacha nke 6x na mmechi larịị.
Ọ bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu mkpụrụ cha cha ohere mpere na RTP of 96.3% na bụ ihe pụrụ iche na-elu ndịiche-enye gị ohere iji merie fọrọ nke nta 500 ugboro gị mbụ eto.